Ny kely jereko, ny zavatra tsara kokoa azo! | Martech Zone
Talata, Aogositra 14, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Indraindray aho manontany tena raha ny tanjona lavitra dia manelingelina antsika amin'ilay asa efa akaiky. Raha mangetaheta bebe kokoa hatrany ianao dia faly amin'izay misy anao ve ianao? Indraindray dia mitaky zavatra mahatsiravina ao an-trano na any am-piasana mba hahalalantsika izay rehetra tokony hisaorana antsika.
Tamin'ity herinandro lasa ity dia niverina namboarina ny bilaogiko. Nanomboka asa vaovao aho ary niasa alina tamin'ny famoronana rindranasa hafa - ary samy mifantoka be dia be izy roa. Tsy juggler mahay aho - tiako ny mifantoka amin'ny tanjona iray ary miasa mba hahatratrarana azy. Vokatr'izany dia tena mifantoka amin'ny asako vaovao izao. Raha vantany vao miala am-piasana aho ary mitsambikina ao anaty fiarako, dia nitodika tany amin'ny tetikasa hafa ny saiko. Amin'ny fiara maraina dia miverina mieritreritra ny asako izy io.
Very tao anatin'ny roa herinandro lasa izay ny bilaogiko. Nanohy namoaka ny famakiako isan'andro aho saingy sporadic no tsara indrindra tamin'ny lahatsoratry ny bilaogiko. Tsy mino aho fa nahavita haingana izy ireo - saingy tsy dia nifantoka be loatra araka ny tokony ho izy aho. Angamba ilay faritra tsy noraharahiako indrindra dia ny fanaraha-maso ny ahy Ad Revenue, Analytics ary filaharana. Fantatro fa manana asa hatao aho ary tsy afaka miahiahy momba ny fahavoazana, ka dia nanapa-kevitra ny tsy hiraharaha izany aho.
Ny fahazarana manara-maso ny laharako sy ny fifamoivoizako dia nanjary fanelingelenana! Tsy mino aho fa hanamarina azy mihoatra ny indray mandeha isan'andro, fa rehefa mijery ireo tarehimarika nihemotra aho dia nieritreritra izany nandritra ny ora maro ary nanandrana nanohitra azy. Izany dia toy ny fanosehana ny onja - ny mpamaky dia momba azy vahana, tsy fanehoan-kevitra. Midika izany fa ny marathon fa tsy ny sprint… ary mila ampahatsiahiviko izany matetika aho.
Ka raha tsy mandeha amin'ny lalana tianao ny statistikao dia angamba mila miala sasatra amin'ny kompà ianao. Azoko atao ny milaza am-pahatsorana fa miverina mihombo tsara aho izao… tapitra ny mpamaky ahy, tapitra ny statut fahana… ary tapitra ny vola azoko. Mila manao izay tsara indrindra vitako aho ary izany dia mijanona mandritra ny fotoana lava ary miala amin'ny fijerena ireo isa. Hiverina any aho Blog Tipping raha vantany vao vita ny tetikasako! Misaotra an'ireo mpamaky rehetra izay niandry am-paharetana.
Arakaraky ny hakako kely no ahazoako zavatra tsara kokoa!
Tags: fanadihadianaparalysisa famakafakanaAnalytics
Ny fifaninanana Wiki Million Dollar avy amin'i John Chow dot Com
Fav.or.it fanokafana Preview
Aug 15, 2007 amin'ny 1: 37 AM
Tantara kely mahafinaritra 🙂 azoko lazaina fa izany no mitranga amiko ankehitriny, manamarina ny antontan'isa Adsense-ko matetika araka izay azoko atao, satria vanim-potoana manatsara ahy izao. Saingy nisy vokany izany, ka tsy ho ela aho dia hihena kely 🙂
Aug 15, 2007 amin'ny 2: 29 AM
Manaiky aho. Mety ho mora ny mirona amin'ny antontan'isa. Mbola mijery ny antontan'isako aho indray mandeha isan'andro izay heveriko fa be loatra.
Mifantoha fotsiny amin'ny fanoratana votoaty tsara sy fivarotana ny blôginao dia ho avy hatrany ny fifamoivoizana 🙂
Aug 15, 2007 amin'ny 8: 12 AM
Afaka mifandray tanteraka aho! Ary indrindra satria nafindra toerana ny bilaogin'ny orinasako ary nanomboka hatrany am-boalohany indray, dia mahatsikaiky ny fotoana laniko amin'ny fandinihako ny antontan'isa tena mampalahelo hatreto. manaova tsaratsara kokoa!
Mirary soa ho anao aho, azoko antoka fa raha vao tafiditra ao anatin'ny savily zavatra ianao dia hanana fotoana bebe kokoa amin'ny fandefasana!
Aug 21, 2007 amin'ny 8: 33 AM
Afaka mifandray amin'io ambony io koa aho. Heveriko fa ampahany manan-danja amin'ny fiainana amin'ny maha-bilaogera (sy mpivarotra / varotra). Indraindray aho dia mahita ny tenako manamarina matetika ny antontan'isa momba ny tranokalako. Tsy maintsy mandaka ny tenako avy eo mba hifantoka amin'ny famolavolana votoaty tany am-boalohany.
Amin'ny maha-mpivarotra matihanina ahy dia fantatro ihany koa izao: Ny fironana handany fotoana amin'ny vinavina, takelaka, sns, fa tsy mipetraka eo anoloan'ny mpanjifanao manidy ny fifanarahana ary manahy momba ny fanamarinana vaomiera any aoriana. Amin'ny maha-bilaogera ahy dia mila mifantoka amin'ny fampiakarana ny mpanjifako aho amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny votoaty lehibe. Ary ho avy ny ambiny, araka ny filazany 😉